Firy taona no mandefitra - Tour De France
Tena > Tour De France > Chris froome tour de france 2016 - ny fomba fanapahana hevitra
Chris froome tour de france 2016 - ny fomba fanapahana hevitra
Firy taona no mandefitra
Mety ho sarotra tononina ny anaran'ny toerana anglisy. Raiso ity toerana ity. Tsotra ny fahitana azy, fa ahoana kosa raha nilaza taminay izahay fa voatonona Grrrrrrrrrrrr-immeeeeeee-SSSS-zzzzzz-P? Mandainga isika, Grimsby.
Saingy ny toerana hafa dia mety ho fiddly ho an'ny vahiny. Ary ireo mpizahatany izay diso hevitra amin'izany, mety hogadraina na hovonoina. Amin'ity fampielezam-peo anio ity dia hanontany isika hoe maninona no sarotra ny tononina ny anaran'ny toerana anglisy - Tsia, vita aho.
Tongasoa eto amin'ny Map Men. - Izahay no lehilahy - Ary eto ny sarintany. ♫ Sarintany Lehilahy, Sarintany Lehilahy ♫ Sarintany, Sarintany, Sarintany, Sarintany Lehilahy, Lehilahy Misy anarana toerana sarotra tononina eran'izao tontolo izao.
Manana an'i Zzyzx i California, manana an'i Ptuj i Slovenia, manana i Greenland
Qeqertarsuatsiaat Na ny Welsh aza sahirana amin'izany
Ary anio hariva dia azontsika antenaina fa hisy oram-be mivatravatra avy any andrefana ka hatrany
Wales. Saingy anarana tsy fantatra tononina mafy natao ho an'ny tanjona fampiroboroboana, toa an'i Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch ankoatr'i-Showoff. - Ny anaran'ny toerana anglisy dia miteraka korontana bebe kokoa noho ny ankamaroany satria matetika izy ireo dia tsotra nefa misy fandrika fonetika tsy azo vinavinaina.
Andramo eto. Lazao mafy izany, ao amin'ny efitranonao na amin'ny fiaran-dalambinao - Ha! Ha! Ha! Ha! - Ha! Ha! Ha! Ha! Tsy marina! Tsy 'mandehandeha' izy io! F-R-O-M-E, tokony ho miharihary fa miharihary, atao hoe 'Froom'. Fa raha 'miala sasatra' ianao. efa nilaza
Iza no nandresy tamin'ny Tour de France 2016?
Tour de France 2016/mpandresy
Faly be aho fa eto miaraka amin'i Guillermo Ochoa, ilay angano mpiambina ny klioban'ny America America, ary i Manuel Neuer, angano an'ny FC Bayern ary ny ekipam-pirenena Alemanina. Misaotra anao niaraka taminay, fotoana tsara izao miaraka amin'ny mpiandry tsatokazo roa tsara indrindra. Manao ahoana ry zalahy? Memo? Salama Moi, hello Manuel, faly aho fa eto, hahita anao indray, mazava ho azy faly aho miaraka amin'ny olona rehetra manana fotoana hijerena an'ity lahatsoratra ity, ity resadresaka ity, Manuel, manao ahoana ianao? Manao ahoana daholo? Salama Memo, faly mahita anao indray, mahita anao ary faly be aho amin'ity resaka kely sy lahatsoratra kely ity hiresaka momba ny zava-drehetra ary salama tsara aho, manomana ny dingana manaraka amin'ny tompon-daka alohan'ny ligy izahay ary mahatsapa tsara.
Manana satroka 201 izy ireo. Midika izany fa manampy lalao ekipa nasionaly 201 ianao. Fandraisana anjara amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany
Be izany. Manana amboara amboara 17 miaraka ianareo ary ny iray taminareo dia efa nahazo Tompondaka Eran-tany. Andao atomboka amin'ny fanontaniana vitsivitsy ananako ho anao anio.
Te hanontany anao roa aho. Andao hanomboka amin'i Manuel. Araka ny hevitrao, inona ireo toetra lehibe tsy maintsy ananan'ny mpiandry tsatokazo mba hahombiazany? Ny zava-dehibe indrindra dia ny hankafizanao ny zavatra ataonao.
Raha te-ho mpiandry tsatokazo ianao dia mila manao fanazaran-tena, mila miezaka isan'andro. Raha miala voly ianao ary te-hamita dia hihatsara ianao ary izany no zava-dehibe. Raha afaka miofana miaraka amin'ny namanao, miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminao isan'andro ianao, dia hihatsara.
Te ho mpiandry tsatokazo foana ve ianao ry Manuel, sa efa nitana andraikitra hafa ianao? Tsia, tamin'ny voalohany dia te ho mpilalao tany ivelany aho, fa rehefa efatra taona aho dia tsy nanana mpiandry tsatokazo tao amin'ny Schalke 04 izy ireo ary nampiditra ahy tamin'ny tanjona ny mpanazatra ary fantatrao fa faritra sarotra izany, tsy nilalao izahay ahitra na kianja mahafinaritra ary tsy dia nahafinaritra loatra izany, fa nanao ny tsara indrindra vitako aho ary tsy nivoaka ho mpilalao avy any ivelany, noho izany dia nijanona tao anaty tanjona aho ary faly tamin'io toerana io. Ahoana ny aminao, memo Efa nilalao toerana hafa ve ianao talohan'ny naha-mpiandry tsatokazo anao? Eny, nanomboka mpikomy teto Amerika aho tamin'izaho folo taona. Avy eo naratra ny mpiambina ny ekipako ary nanontany anay ny mpanazatra 'iza no te hanohy? 'Tanjona?' ary hoy aho hoe 'izaho, izaho, ahy' ary dia izay.
Niantehitra tamiko ny mpanazatra ary nino izany aho. Mazava ho azy fa miombon-kevitra amin'i Manuel aho. Mila tia mijoro amin'ny tanjona ianao, tsy mora ny mijoro eo.
Amin'ny maha mpiandry tsatokazo anao dia mila tanjaka ara-tsaina ianao. Tokony hanana fahatokisan-tena be ianao. Satria ianao irery indraindray ny ankamaroan'ny lalao.
Hitako fa isika telo dia manana zavatra iraisana ary mpiandry tsatokazo maro eto amin'izao tontolo izao dia manomboka amin'ny maha outfield ary avy eo miverina amin'ny tanjona, izay toerana tena lehibe. Heveriko fa izany no toerana lehibe indrindra amin'ny baolina kitra. Memo, amin'ny mpiandry tsatokazo maoderina dia tena zava-dehibe ny fahaizana milalao tsara amin'ny tongotrao.
Misy zavatra tianao holazaina momba an'io ve? Mitovy ve ny hevitrao? Zava-dehibe ho an'ny mpiandry tsatokazo ankehitriny ve ny ahafahan'ny zatovo milalao tongotrao? Eny, heveriko fa amin'izao fotoana izao dia tokony ho tsara amin'ny tongotra ianao amin'ny baolina kitra. Mila asan'ny tongotra tsara ianao. Mety ho moramora kokoa ho an'ny mpiandry tsatokazo 15, 20 taona lasa izay, ny tanany ihany no nampiasain'izy ireo, saingy izao ny mpanazatra rehetra dia maniry ny hanana ny baolina hanombohana ny fanafihana amin'ny mpiandry tsatokazo.
Vitan'i Manuel tsara ireo zavatra ireo. Tena tsara amin'ny tongony izy, afaka milalao baolina fohy, baolina lava ary mieritreritra aho fa ny mpiandry tsatokazo tanora dia mila mianatra izany faran'izay haingana. Tena niaraka tamin'i Manuel aho.
Hitanay fa be ny zavatra nataonao teny an-tsaha. Manana karazana fanabeazana ve ianao? Ahoana no hiomananao ho tena tsara amin'ny tongotrao? Voalohany indrindra, misaotra anao Memo, fa manao zavatra tsara koa ianao. Im-betsaka aho no nahita azy ary eny, ireo no andrasan'ny mpanazatra amin'ny fiofanana.
Azonao atao ny mampiditra ireo mpiandry tsatokazo amin'ny lalao fananana. Mitaona ireo zavatra ireo amin'ny fiofanana ianao. Matoky anao ny mpilalao eo alohanao rehefa tafiditra ao anatin'ny lalao fananganana isaky ny fotoam-panofanana ianao mba hananan'izy ireo fahatsapana tsara amin'ny lalao no mpiandry tsatokazo voalohany an'ny ekipam-pireneny avy amin'ny amboara eran-tany 2014 sy 2018.
Inona avy ireo traikefa tsara indrindra azonao tamin'ny 2014 sy 2018? Eny, mazava ho azy tiako ny miresaka momba ny 2014. Eny, azo antoka fa ny lalao voalohany manohitra an'i Mexico (2018). Fanombohana ratsy ho antsika io ary fanombohana tsara ho an'i Mexico.
Nahavita asa tsara nanohitra anay izy ireo, dia gaga anay tamin'ny lalao fanafihana sy ny valiny. Raha tsy mandray ny dingana voalohany ianao dia tsy afaka mandeha amin'ny lalao mandondona. Fanandramana vaovao ho antsika tsirairay avy teo amin'ny toerany, sambany io no tsy nahatratra ny fihodinana manaraka i Alemana.
Traikefa vaovao ho anay tsirairay avy izany. Nandresy ny Tompondaka Erantany tamin'ny 2014 isika ary fifaninanana lehibe ho anay izany. Traikefa tena tsara.
Tsy hohadinoiko mihitsy io fotoana io. Iray amin'ireo zavatra tsara indrindra niseho tamin'ny fiainako io. Na izany na tsy izany.
Ary ianao, ry memo? Manana traikefa miavaka amin'ny 2014 ve ianao? Tsara ny lalao nifanandrinananao tamin'i Brezila tamin'ny taom-pilalaovana voalohany 2014 ary nahavita asa lehibe koa ianao tamin'ny 2018. Inona avy ireo zavatra niainanao tsara indrindra tamin'ny roa amboara eran-tany? Eny, mazava ho azy fa zavatra manokana ho ahy tamin'ny 2014 tany Brezila satria izy no Tompondaka Eran-tany fahatelo, fa ny zavatra niainana voalohany teny an-kianja. Niavaka izany satria nandresy izahay tamin'ny lalao 1-0 tamin'ny lalao voalohany nifanandrinako tamin'i Kamerona.
Taorian'ny nilalaovantsika tamin'i Kroasia tsia, nanohitra an'i Brezila ary 0-0 izany.
Mazava ho azy fa zavatra manokana ho ahy ny milalao amin'i Brezila ary koa zavatra manokana ho an'i Manuel. Tadidiko ny manasa-dalana, ny vokatra tsy nampoizina. Ity mondialy ity dia niavaka ho anay roa.
Ary ny amboara eran-tany farany, ho an'i Mexico, ho ahy, hilalao amin'ireo tompon-daka eran-tany. Tsy mora mihitsy ny manomboka Tompondaka Erantany toy izao. Mazava ho azy fa sarotra be taminay izany, saingy nino izahay fa manana kalitao handresy ny ekipa Alemanina.
Fotoana nahafaly anay izany fa tsy ho an'i Manu. Mieritreritra aho fa afaka milalao toy izany matetika i Mexico ary hiezaka ny hanao izany isika amin'ny ho avy. Memo, raha tonga tany Mexico i Manuel Neuer, fomban-drazana Meksikana iza no hampahafantarinao azy? Mora izany.
Henoy taco eny amoron-dranomasina any Tulum.
fitsangatsanganana an-tsokosoko chris de france 2019
Labiera mangatsiaka tsara, toy ny amin'ny Oktoberfest. Miaraka amin'i mariachi ao aoriana. Drafitra tsara izany.
Taco eo amoron-dranomasina misy labiera sy mariachi ao aoriana. Ary ianao, manuel? Inona no fomban-drazana any Alemana asehonao an'i Memo raha tonga ao an-tanànanao izy? Ho an'ny tanànako? Zava-dehibe ny mankany amin'ny Oktoberfest. Any Munich io.
Angamba fantatr'i Memo fa any amin'ny toerana sasany any Amerika dia manana an'io fomba io izy ireo. Manangana tranolay izy ireo na aiza na aiza, fety lehibe io. Mihevitra aho fa tsy maintsy eto izy indraindray raha manana fotoana na fotoana mety hitsidihana an'i Munich.
Ny fotoana mety indrindra handehanana mankany Oktoberfest. Fomban-drazana lehibe izany. Lavorary, fomban-drazana tena tsara ireo.
Raha mifankahita ianareo azafady ampahafantaro ahy ary faly aho miaraka aminao. Tsara raha eny amoron-dranomasina miaraka aminareo roa no manana taco na fitsidihana an'i Oktoberfest. Misaotra anao noho io tafatafa io.
Tena resadresaka tena tsara izany. A Charla entre los Grandes, izany no antsoinay hoe ity resaka ity. Misaotra anao mamaly
Misaotra anao tamin'ny fotoananao, azo antoka. Ary ho an'izay rehetra mahita an'ity dia antenainay ny hahita anao tsy ho ela. Misaotra betsaka! Manuel, miarahaba ny anaranao farany tamin'ny Bundesliga ary mirary soa ho an'ny lalao manaraka amin'ny Champions League.
Memo, ary mirary ny soa indrindra ho anao ary manantena aho fa hilalao taona vitsivitsy ianao hahafahanay mifanohitra. Manantena aho fa hihaona amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany manaraka izy ireo. Manome anao ny ankihiben-tànana aho, eny manantena izahay fa, misaotra betsaka amin'ny zavatra rehetra.
Misaotra tamin'ny fotoananao.
Kely azo atao amin'ny bisikiletahahazoana, indrindra ho an'ny vehivavy. Ireo mpamily mahazatra ny ekipa lehibe dia mahazo hatramin'ny 45000 euro ho karama isan-taona, ankoatry ny kintana. Ampy ho an'ny fiainana izany.
Iza no mety handresy ny Tour de France?
Mpandresy an-tsehatra nyTour de Francedia i 'kanibal' Eddy Merckx (Belzika) miaraka amina fandresena 34 isan'andro, kintan'i sprint Mark Cavendish (Grande-Bretagne) nanakaiky azy tamina fandresena 33.
Salama daholo, izaho no Arnaud Jouffroy, mpikambana ao amin'ny Orbea Factory Team aho. Androany isika dia mihaona amin'i Victor Koretzky, atleta Orbea izay mizara ny fitiavako môtô. Nanaitra ny manodidina anao tamin'ny bisikiletanao ianao.
Manao ahoana ianao? -Tsara ary ianao? Salama aho.-Manana bisikileta mahafinaritra ianao eto. -Eny, ity ny keliko- Eny. -Ny S1000R keliko.
Mitaingina azy amin'ny boriborintany aho indraindray. Tokony hiara-manao izany isika amin'ny fotoana iray, milay izany. Azo antoka, hiezaka ny hianjera amin'ny tany amin'ny lohalintsika isika.
Tsy afaka aho, fa fantatro fa mahay ianao. Ilay mash kely nampiasanao teo am-panomanana ny amboara eran-tany. - Taona vitsivitsy lasa izay. -Rehefa manao moto moto isika.-Nanao moto tamin'ny iray izahay. -Eny, tsara be ilay izy.
Tsy mila bisikileta matanjaka ianao amin'ny fivezivezena maotera. Mazava ho azy. Ary avy eo ny bisikileta. -Ny faritra Orbea iray manontolo. -Eny.
Manana ny herinaratra aho, ny Wild FS. -Eny-heveriko fa handeha hiaraka amin'ity ianao. -Eny-raha hiaraka isika. -Okena, fa maninona ianao no miteny an'izany? Mihevitra ve ianao fa miadana loatra aho Mba hahafahako mampiasa ny Rallon. - Ary afaka manao dingana lehibe isika. -Eny-Avy eo afaka miova izahay raha tianao. -Hiezaka isika.-Okay. -Manana ny Oiz OMX vaovao koa aho.-Ilay ampiasaiko amin'ny hazakazaka. -Eny.
Io no tena ampiasainao. Io no tena ampiasaiko. Mbola mampiasa an'i Almà ihany isika, saingy tsy toy ny taloha intsony. -Mety.
Fa nahoana izany? Moa ve noho ny fivoaran'ny làlana? Mila mpitroka hatairana taitaitra tsara kokoa ve ianao? -Eny, ara-teknika kokoa ny lalana. -Eny-Ary maivana loatra ny Oiz---Afaka mandeha miaraka amin'izay ianao. Eny, ezahinay tsy hatao sarotra loatra - ary mampiasa bisikileta mitovy matetika araka izay tratra. -Eny, tsara izany.-Fantatro io, ilay Terra. -Ny zavatra hitanao ihany, sa tsy izany? Eny marina, ilay Gravel kely.
Ity dia ao anaty mode gravel, fa nampiasaiko ihany koa tamin'ny fomba cyclocross ho an'ny tompondakan'i Frantsa tamin'ny taon-dasa. Ie. Bisikileta kely tsara sy matanjaka izay afaka mankaiza. - Tena be zavatra izy io. - Tsara izany.
Mahafinaritra ny mitaingina vatokely indraindray mba hanovana. Mamela ahy handeha lavitra kokoa ary handeha amin'ny zotra izay tsy dia ataoko akory. Tsara kokoa amin'ny fampiasana isan'andro. - Ary avy eo ny bisikileta fifaninanana. -Ary ny aero.
Izaho dia nanana ny Aero nandritra ny herintaona fa tsy ho ela dia ho lasa switch Orca Ltd. -Eny, misy zavatra hafa bebe kokoa izy. -Marina tokoa.
Mampiasa ny Aero matetika ianao mandritra ny herinandro fiofanana. Ie, tsara be. Nivoatra kely ny raharaha, manandrana mampiasa bisikileta an-tendrombohitra izahay mba hampiofanana mafy koa. -Eny. -Ny eny an-dalana koa indraindray mba hananantsika toerana mety ary iray amin'ny bisikileta.
Eny, rehefa mitaingina lavitra isika dia ampiasaintsika be dia be. Io no tena ampiasainay lavitra amin'ny lavitra. Fitaovana mahafinaritra sy mahafinaritra.
Izaho manala ny palitao. Ary ahoana ity bisikileta tsy misy kodiarana ity? Nampiasako io tato ho ato. Izaho koa somary andrana bisikileta sy enduro.
Maty anefa ny kodiarana ka tsy maintsy ovaiko. Ok, tsara.-Hanana kafe ve isika? -Andao.
Andao. Izaho aloha. Tsy maninona.
Misaotra anao manana anay, Victor. Hafaliana ho ahy izany. -Miaraka aminao.
Voaravaka tsara. Iza no nikarakara izany? - Léa, mazava ho azy. -Marahaba an'i Léa, tsara tarehy izy ary mahatsapa tena milay.
Hanelingelina anao amin'ny fanontaniana vitsivitsy aho hahafantaran'ny olona anao bebe kokoa, na dia efa malaza be aza ianao. Ka lazao amiko hoe ahoana no nanombohanao nanao bisikileta nanomboka tamin'ny zokiko lahy, nanentana ahy be izy. Lehibe kokoa izy ary hitako nanao zavatra mahafinaritra amin'ny bisikiletany. - Firy taona ianao tamin'izay? -M dimy na enina aho.
Tena nanosika ahy izany. Nanomboka nanao hazakazaka bisikilety an-tendrombohitra sy be tendrombohitra aho. Tamin'ny farany, nanapa-kevitra ny hanokan-tena tanteraka amin'ny bisikileta an-tendrombohitra aho taorian'ny Tompondaka eran'izao tontolo izao tamin'ny taona 2011.
Rehefa lasa tompon-daka eran-tany ianao dia nanao tantaran'ny bisikileta an-tendrombohitra. Fa maninona no nahatonga ny tantara izany? Izany dia satria izaho no tompon-daka eran-tany voalohany nitondra bisikileta 29 '. Nisy tokoa ny adihevitra teo raha toa ka tsara ny kodiarana 29? Ny fiovana avy amin'ny kodiarana 27,5 'dia nitranga taorian'io, saingy io no fiandohan'ny bisikileta 29', ka nanao tantara aho. - Tsara tarehy, tompon-daka eran-tany voalohany tamin'ny 29 '. - Marina indrindra.
Lazao amiko Vic, inona no halanao amin'ny bisikileta? Efa nitranga in-droa izany, rehefa tsy maintsy mivoaka aho, rehefa mangatsiaka be, avy ny orana na ny lanezy. Tonga amin'ny tanana sy tongotra mangatsiaka ianao, te hody fotsiny, mandro ary hihinana zavatra satria noana. Indrindra fa mbola tanora ianao ary tsy manana sakafo faran'izay tsara ampiasaina, dia hadisoan'ny vao manomboka izany. -And-- -Mangatsiaka fotsiny ianao.
Eny, mihamangatsiaka ianao, izay mety hiteraka hypothermia. Nitranga tamiko izany taloha ary izay rehetra azonao eritreretina dia ny sakafo mahafinaritra, ny sakafo tianao indrindra. Te hody sy hihinana fotsiny ianao.
Ka inona no irinao rehefa hypothermic ianao? Ny tsindrin-tsakafo ankafiziko indrindra heveriko, flan mahafinaritra sasany. Eny, lazao amiko ny fandresena tsara indrindra vitanao tamin'ny bisikileta. Heveriko fa ny fahatsiarovako fifaliana indrindra dia ny fiadiana ny tompondakan'ny zandriny frantsay tamin'ny 2011, avy eo lasa tompon-daka eran'izao tontolo izao aho, saingy izany no tadidiko tsara indrindra.- Nandresy tamin'ny hazakazaka aho tamin'ny toe-javatra ratsy indrindra. -Teo aho tamin'io. -Naharesy tamin'ny hazakazaka fampitaovana teo aloha isika. -Eny, fahatsiarovana tsara izany. -Aiza indray izany? -In Méribel Eny, Méribel.
Nandresy tamin'ny fotaka ianao, saingy nandresy tamin'ny hazakazaka fampitàna an-dalambe izahay. Ie. Teo amin'ny laharana faharoa aho tamin'ny fotoana rehetra ary nahatratra ny laharana voalohany tamin'ny feny farany.
Vita tamin'ny sisiny kely aho, fa ampy handresena izany. Inona no toerana tsara indrindra alehanao amin'ny bisikileta an-tendrombohitra? Aiza no tianao hitondrana fiara Izahay manana seza tsara eto, fa milaza any akaikin'ny Montarnaud na Clapiers aho. Misy toerana mahafinaritra misy teboka mitsambikina tsara.
Inona ny faritra tianao indrindra? Hoy aho Mont-Sainte-Anne any Canada. Io no lalan'ny amboara eran-tany mahavariana, any an'ala izy io. - Ny tena feno? -Mameno sy tena teknika izy io.
Ary izy ireo dia nanao hazakazaka tamin'ny Tompondaka Eran-tany isan-taona nandritra ny taona maro. Tokony hiaina izany ianao, io no làlana tsara indrindra ho ahy. Okay.
Izany ve ny fifaninanana nitondra anao lavitra indrindra? Tsia, izaho no lavitra indrindra tany Aostralia sy Japon. - Ie. -Tao Japon ho fiomanana amin'ny Lalao olympika miaraka amin'ny hetsika fitsapana. -Niditra tamin'ny faharoa ianao. -Eny amin'ny laharana faharoa amin'ny haingam-pandeha miaraka amin'i Nino, ary efa nanao fiadiana ny amboara eran-tany roa na telo tany Aostralia izahay, Cairns ary Tompondaka Erantany, izany no halavirana lavitra indrindra nandehanako avy tany an-trano, tadidiko ianao Raha mbola tanora ianao solomaso sy volo lava, toa mpamily rehefa nitondra fiara niaraka tamin'ny zokinao lahy aho.
Teo koa ianao ary nitondra scooter maro. Inona ny tetika tianao indrindra amin'ny scooter? Matetika aho no nanohana anao avy teo anilanao niaraka tamin'ny scooter-ko. Tiako ny manao tailwship sy barspins. -Eny. -Ny zavatra mbola azoko atao, inona ny tanjonao faratampony? Inona no nofinofisinao Inona no manosika anao hanao fanatanjahan-tena isan'andro? - medaly olympika. -Marina tokoa? Eny, io no nofinofin'ny bisikileta an-tendrombohitra rehetra.
Fa satria isaky ny efa-taona dia henjana. Sarotra aza ny mahafeno fepetra amin'ny hazakazaka. Indrindra any Frantsa, eto aho mba hahazo medaly.
Io no nofiko farany. Ka ny tanjonao amin'ity taona ity dia ny Lalao Olaimpika, ianao no laharana roa amin'ny filaharana manerantany anio, mbola manana fihodinana roa amin'ny Tompondaka Erantany ianao alohan'ny Lalao Olaimpika. Firy ny mpamily azony atao ao? Firy ny tiako holazaina amin'ny teny frantsay.
Tsy misy afa-tsy frantsay roa. Efa napetraka ny laharana nanomboka ny taona 2019, ny laharam-pirenena ho an'ny Lalao Olaimpika - okay. -Tsy hihetsika izany.
Tena lavitra be any ambadik'i Italia isika, izay faharoa, mba hitarika. Mba hahazoana ny faharoa, ny tiako holazaina, ka isika roa ihany no ho sarotra ka sarotra ny mamela ny tenanao hahafeno fepetra amin'ny iray amin'izy roa. Rehefa tonga amin'ny fiara ianao, inona ny rojo vy anananao amin'ny bisikiletanao? Nampiasa rojo vy 36 aho.-Tsara be nandritra ny taona. -Okay, manao hazakazaka fohy 38 isika indraindray. -Eny. - Ka tena mandeha haingana.
Iza amin'ireo kodiarana no ampiasainao amin'ny bisikiletanao? Miaraka amin'i Michelin dia sambatra isika manana laharana feno. Mandritra ny taona dia mitaingina kodiarana 2,25 'aho.
Miaraka amin'ny mombamomba ny tena ambany sy finday. Ary eo anelanelan'ny 1.3 sy 1.4.-Okay, avy eo fanerena ambany.-Eny.
Aleo manohy miresaka momba ny bisikileta, heveriko fa betsaka ny olona te hahafantatra ny lanjan'ny bisikiletanao? Ity dia lohahevitra iray lehibe ho ahy koa. Miezaka ny ho maivana araka izay azo atao izahay, ary manandrana manana bisikileta azo antoka, izany no zava-dehibe indrindra. Iray amin'ireo fanamboarana maivana ho ahy ny maody sprung manodidina ny 9,5kg. -Eny, ary amin'ny bisikiletako somary henjana dia mandeha mora foana eo ambanin'ny 9kg. -Mora izany. -Eny, 8,8 kg.
Mora rehefa esorinao ireo mpitroka manaitra sy tsorakazo mampifandray dia milatsaka haingana ny bisikileta amin'ny bisikileta somary henjana. Misy filana hafa ankoatry ny bisikileta? Eny, misy zavatra maro tiako hatao. Nahafinaritra ahy ny nanao DIY tao an-trano tato ho ato; na dia ao amin'ny garazako aza dia tiako ny manavao - ary mamorona singa vaovao. -Ohay, milay.
Andao isika hiroso amin'ny quiz Koretzky. -Inona ny loko tianao indrindra? -Yellow.-Vonona ianao! -Tsy fantatro akory.
Sakafo tianao indrindra? Mahay be izy, tiako daholo! Inona ny sarimihetsika tianao indrindra? Dikkenek.-Mahatsiravina izany! - Tsara! Tsy maintsy natao izany. Inona ny mozika tianao indrindra? Mozika elektronika ary mangatsiatsiaka.
Kafe sa dite? Kafe, labiera na divay? -Wine.-Divay mena na divay fotsy? -Divay mena.-Maizina sa blonde? -Miresaka labiera ve isika? Ie.
Blonde avy eo-Ny zavatra hafa? -Maindro.-Mafana sa mangatsiaka? -Hot.-Mamy sa Mahavoky? -Savory.
Miakatra sa midina? Downhill. Maloto sa Enduro? -Enduro. -Ny fiara sa ny moto? Samy.
Instagram sa Facebook? -Instagram. -Video sa sary? Lahatsary Mirary anao sy isika rehetra ho tonga amin'ny Lalao Olaimpika ary hanome fotoana mahafinaritra ho anay, fa indrindra indrindra, mifalifaly.
Tokony ho salama tsara ianao amin'izany. Tokony haka am-pofoana isika, hiezaka ny haharaka anao aho. -Lasa izao. -Mahatalanjona, nandany ny tontolo andro tany amin'ireo toerana tianao fampiofanana ianao.
Nanao dia lavitra izahay ary nahafinaritra be, ary efa ho maizina izao. Misaotra anao manana anay. Ary mirary soa ho an'ny vanim-potoana ho avy.
Faly aho fa afaka nitondra anao ho any amin'ity toerana mahafinaritra ity, nanao fitsambikinana teknika vitsivitsy izahay. Saingy tsy nanadino ny momba ny fitaizam-batana izahay, nikarakara ny fiakarana izahay, hanohy ny fiofanana mandritra ny fotoana sisa aho ary hiezaka ny hahazo ny lalao Olaimpika, hiezaka ny hahazo ny toerako aho, izany no tanjona.
Ohatrinona no karamao amin'ny bisikileta?
Ireo mpamily mahazatra ny ekipa lehibe dia mahazo hatramin'ny 45000 euro ho karama isan-taona. Miaraka amin'ny vola bonus, ny matihanina antonony dia mahazo 70000 isan-taona, koa karama mety.antsapakaIreo mpamily tsy mahomby na ampiasain'ny ekipa kely kokoa dia hihena be.14. 2017.
fanadihadiana an'i lance armstrong
Iza no mpandresy tanora indrindra tamin'ny Tour de France nanomboka tamin'ny taona 1945?
Egan Bernal diaj? ngster Tour-From-Frantsa-Mandresy mandritra ny 110 taona - Blick.07.08.2019
Amin'ny ankapobeny, saika tsy ho vitan'ny ankamaroan'ny bisikileta matihanina ny mahazo karama iray tapitrisa euro isan-taona nefa tsy mila mampiseho fandresena lehibe amin'ny klasika toa an'i Paris-Roubaix5. Ny salanisan'ny karaman'ny mpamily WorldTour isan-taona dia eo ho eo amin'ny 270.000 euro isan-taona.19. 2019.
Ohatrinona ny karaman'ny mekanika bisikileta isam-bolana?
Ny karama fanombohan'ny mpitaingina bisikileta dia 1.800 hatramin'ny 2.100 euroVOLANA. Arakaraka ny itomboan'ny traikefa anananao dia mitombo koa ny anaokaramamanohy. Azonao atao ihany koa ny manohy mianatra. Amin'ny maha teknisianina mechatronics misy kodiarana roa anao dia afaka mahatratra hatrany amin'ny 2.500 euro ianao ary amin'ny maha master anao hatramin'ny 4.000 euro!
Iza no tanora indrindra nandresy tamin'ny Tour de France?
Mpandresy an-tsehatra tanora indrindra amin'ny fotoana rehetradiaFabio Battesini (Italia), izay nahazo fizarana iray andro tamin'ny 1931 tamin'ny faha-19 taonany.
Iza no ankafizin'ny Tour de France 2016?
Nandritra ny 2016 Tour de France, Chris Froome (Team Sky) dia hitan'ny maro fa ny lohalaharana mialoha ny hazakazaka amin'ny sokajy ankapobeny. Ireo mpifanandrina aminy akaiky indrindra dia noheverina fa i Nairo Quintana (Ekipa Movistar) sy i Alberto Contador (Tinkoff).
Rahoviana no manomboka sy mifarana ny Tour de France?
Ny Tour de France 2016 dia andiany faha-103 an'ny Tour de France, iray amin'ireo Grand Tours amin'ny bisikileta. Ny hazakazaka maharitra 3,529 km (2,193 mi) dia nahitana dingana 21, nanomboka tamin'ny 2 Jolay tao Mont Saint-Michel, Normandy, ary nifarana tamin'ny 24 Jolay niaraka tamin'ny dingana Champs-Élysées tany Paris.
Firy ny ekipa ao amin'ny Tour de France?
Ekipa roa amby roapolo no nandray anjara tamin'ny andiany 2016 an'ny Tour de France. Ny hazakazaka dia ny faha-18 tamin'ireo hetsika 28 tao amin'ny UCI World Tour, ary ny UCI WorldTeams valo ambin'ny folo rehetra dia nasaina ho azy, ary voatery, hanatrika ilay hazakazaka.